Mananatra sy manefy
Indro, sambatra ny zanak’olombelona izay anarin’Andriamanitra; koa aza atao ho zavatra kely ny famaizan’ny Tsitoha. Jôba 5:17
Ny fizahan-toetra sy ny toeèjavatra sarotra no fomba fifehezana nofidin’ny Tompo ary koa fepetra notendreny hahazoana fahombiazana. Izy no mahita ny hery sy ny fahalemena ao anatin’ny olona sasany, ka raha voahitsy araka ny tokony ho izy izany dia mety ho azo ampiasaina eo amin’ny fampandrosoana ny asany. Araka ny fitantanany, dia entiny ho eo amin’ny toerana samy hafa sy toe-javatra isan-karazany ireo olona ireo mba hahita ny kilema eo amin’ny toetrany izay tsy fantany akory teo aloha. Omeny azy ireo ary ny tombontsoa hanitsy izany kilema izany mba hahombiazan’izy ireo amin’ny asa fanompoana Azy.
Ny fampirisihina antsika hiharitra fizahan-toetra dia mampiseho fa misy zava-tsarobidy hitan’ny Tompo ao anatintsika ka tiany hampitomboina. Raha tsy hitany misy zavatra mety hanome voninahitra ny anarany ao antintsika, dia tsy handany fotoana hanadio antsika Izy. Tsy ny vatosoa ambany vidy no hataony ao anatin’ny meminy. Ny akora sarobidy kosa no dioviny. Ataon’ny mpanefy ao antin’ny afo ny vy mba hahafantarany ny toeny. Avelan’ny Tompo ho ao anatin’ny memin’ny fahoriana ny olom-boafidiny mba hisedrany ny toetrany ary koa mba hahitany raha azo volavolaina ho amin’ny asany izy ireo na tsia.
Mety heverintsika angamba fa tokony handinika ny fontsika isika ka hamaritra ny asantsika amin’ny alalan’ny fenitra apetratsika ihany, saingy tsy izany no izy. Tsy fanavaozana no hoentin’izany fa fasimbana ihany. Tsy maintsy miantomboka ao am-po ny asa ka avy eo dia hihariary eo amin’ny toetra sy ny fomba fiteny , ny endrika ary ny fomba fanao eo amin’ny fiainana fa nisy ny fiovana. Amin’ny fahalalantsika an’i Kristy amin’ny amin’ny alalan’ny fahasoavany efa narotsany be dia be no hahatonga antsika ho voaova (...). Amin’ny fanetren-tena no hanitsiantsika ny kilema sy ny fahalemen-toetra rehetra, koa satria mitoetra ao am-pontsika Kristy, dia mety ho antika ny ho anisan’ny fianakaviam-ben’ny lanitra ao ambony.
Ny kristianina dia tsy natao hihazona ireo fahazarany feno ota na hankamamy ny kileman-toetrany. Na inona na inona mety ho fahalemenao, ny Fanahin’ny Tompo dia hanome anao ny fahafaha-mamantatra azy ireny ary ny fahasoavana dia homena anao mba hahazoana mandresy ireny.